Ilwareed.com » Waa Maxay Qaamo-qashiir (Mumps)? Sidee looga hortagi karaa?
Waa Maxay Qaamo-qashiir (Mumps)? Sidee looga hortagi karaa?
November 9, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Qaamo-qashiir waa cudur ku badan caruurta wuxuuna ku dhacaa qanjirka lagu magacaabo “Parotid Gland”, qanjirkaan wuxuu ka mid yahay qanjirrada soo daayo calyada.
Waxaa badanaa keeno caabuq feyruus waxaana calaamadihiisa ka mid ah:
- Barar iyo xanuun markii wax la calaanjinayo (bararka wuxuu noqon karaa hal dhinac laakiin wuxuu u badanyahay in labada qanjir ay bararaan)
- Xanuun xiniinyaha ah (isla feyraska keena qaamo-qashiirka ayaa keeno caabuq xaniinyo kaaso hadii aan la daaweyn u keeni kara dhalinyarada dhalmo l”aan)
- Calaamadaha waxaa ka mid ah: afqaleel, dhago-xanuun iyo in codka uu xirmo.
- 20% ka mid ah ilmaha ku dhaco qaamo-qashiirka wax calaamado ah ma yeeshaan waxayna halis leedahay in cudurka uu ku faafiyo caruur kale iyadoo aan laga warqabin.
Markii cudurka caruurta ku soo socdo waxaa lagu fahmaa qandho, madax xanuun, cunno xumo iyo tabardarri.
Badanaa cudurka wax baaritaan ah laguma sameeyo oo waxaa lagu gartaa muuqaalka iyo calaamadahiisa.
Qaamo-qashiirka malahan daawo u gooni ah waxaa loo isticmaalaa daawo kaalmaati ah sida qandho jabis, in biyo iyo cusbo lagu luqluqdo iyo cabitaan badan.
Ilmaha in aan la siinin furuutka iyo waxyaabaha aashitada leh inta xanuunka hayo maadaama waxyaabahaas ay kiciyaan qanjirrada calyada taasoo xanuunka uga sii dari karta.
Qaamo-qashiirka waa cudur iska baaba”a iyadoo uusan gaysan dhibaato weyn.
Qaamo-qashiirka waxaa looga hortagi karaa tallaal loogu tala galay oo la siiyo caruurta.